Otu esi eme nkwalite na Fedora 35 site na Fedora 34 - LinuxCapable
Otu esi eme nkwalite gaa na Fedora 35 site na Fedora 34
Wednesday, November 3, 2021 Monday, September 20, 2021 by Jọshụa James
Fedora 35: Usoro iheomume ụbọchị mwepụta
Ihe achọrọ maka nkwalite
Wepu ngwugwu ochie ochie
Kwalite na Fedora 35
Nleba anya mbụ wee nyochaa ụdị Fedora OS
Fedora ewepụtala ntọhapụ beta mbụ ha maka Fedora 35 nke emere na 14th nke Septemba 2021. OS ọhụrụ ahụ na-eweta mgbanwe ole na ole, ọkachasị Linux Kernel 5.14, Gnome 41, PHP 8, Flatpack nkwado nchekwa ndị ọzọ, Ogwe ọhụrụ maka ntọala ọtụtụ ọrụ, ịnweta profaịlụ ike site na menu tray sistemu, yana ọtụtụ ndị ọzọ.
The nkuzi n'okpuru ga-akụziri gị otú ịga nke ọma kwalite Fedora 34 gaa na Fedora 35 Beta ewepụtara ọhụrụ.
Fedora 35 ka atọrọ ka ewepụtara ya na Ọktoba 19, 2021.
Ihe na-esonụ bụ usoro iheomume nke ntọhapụ.
Iberibe beta: Aug 24, 2021
Mwepụta Beta: Sept 14, 2021
Ndaghachi Beta 1: Sept 21, 2021
Ndaghachi Beta 2: Sept 28, 2021
Nkwụsị ikpeazụ: Oct 5, 2021
Ntọhapụ ikpeazụ: Oct 19, 2021
Agbanyeghị, ụbọchị a nwere ike ịlaghachi azụ na nkeji gara aga, mana ọ dị ka edobere ya na nkume ugbu a.
OS akwadoro: Fedora 34
Mbụ, tupu ihe ọ bụla, melite gị Fedora Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Dị ka o kwesịrị, ị ga-ehichapụ sistemụ Fedora gị dị ugbu a site na iwepu ngwugwu ochie dị ka ndị a:
Nzọụkwụ mbụ bụ imepe ọdụ Fedora gị mejuputa iwu a ka ịwụnye ngwugwu dnf-plugin-system-upgrade:
Rịba ama na ekwesịrị itinye nke a na ndabara; Otú ọ dị, a ga-eme ya iji hụ na ọ dị na sistemụ gị.
Nzọụkwụ na-esote bụ ịme iwu nkwalite sistemụ ugbu a ka ibudata Fedora Beta ntọhapụ 35.
Na-esote, a ga-akpali gị ozi ọhụrụ gbasara nrụnye n'ozuzu, kwalite, na mbelata nke ngwugwu yana nha nbudata.
Nke a ga-ewe oge dabere na ngwaike yana sistemụ arụmọrụ dị njikọ ịntanetị.
N'oge nrụnye, ị ga-ahụ ozi na-enye ndụmọdụ gbasara ibubata igodo GPG maka Fedora 35.
Na-esote, ị ga-ahụ na njedebe gị ka usoro ahụ zuru ezu yana na ị ga-achọ ịmaliteghachi usoro Fedora gị iji mee ka Fedora 35 rụọ ọrụ nke ọma.
Ka ịmalitegharịa sistemụ gị, jiri iwu a:
Usoro ahụ ga-amaliteghachi ugbu a, ị ga-ahụkwa ogwe ọganihu na-adụ gị ọdụ maka ọganihu ikpeazụ.
Ọmụmaatụ nke nkwalite nrụpụta na-aga n'ihu:
Ozugbo nkwalite ahụ mechara, Fedora ga-eweghachi gị na ihuenyo nbanye.
Na-esote, ọ bụ ezi echiche ịme ihe ndị a iwu cat na ọdụ Fedora 35 gị iji chọpụta na nkwalite ahụ na-aga nke ọma:
Dịka ị na-ahụ, ị ​​kwalitela nke ọma na Fedora Linux ka ọ bụrụ ụdị "35 (Mbipụta Mbipụta Ụlọ ọrụ)."
N'ikpeazụ, mgbe ị na-emelite sistemụ Linux OS ọ bụla, a na-adụ ọdụ ka ihichapụ ngwugwu ochie / ochie. Iji mee nke a na Fedora 35, jiri iwu a:
Cleaning up downloaded data...
N'ime nkuzi, ị mụtala otu esi ebulite Fedora 34 gaa Fedora 35. Mara, Fedora 35 ka nọ na ọnọdụ beta. A na-adụ ọdụ ka ị were nkwado ndabere data tupu ịkwalite ma nwee nhọrọ ntụgharị naanị ma ọ bụrụ na. Ntọhapụ a na-ewepụkwa Python 3.5 (EOL Sep 2020) dabere kpamkpam.
Categories Fedora Tags Fedora 34, Fedora 35 Mail igodo
Tọzdee, Septemba 23, 2021 10:26 ehihie
Daalụ maka ntuziaka ahụ, na-arụ ọrụ nke ọma! Fedora hụrụ n'anya 35.
Tuzdee, Ọktoba 12, 2021 2:06 nke abalị
Akamba ibuot, ekele
Tuzdee, Ọktoba 12, 2021 2:12 nke abalị
Daalụ, Ferdinand, obi dị m ụtọ ịnụ ka ọ rụpụtara :).
Tọzdee, Ọktoba 14, 2021 5:48 nke ụtụtụ
Kedu ihe anyị ga-eme iji gbanwee sistemu beta anyị ozugbo ewepụtara ụdị ikpeazụ nke Fedora 35?
Tọzdee, Ọktoba 14, 2021 6:29 nke ụtụtụ
Ozugbo ewepụtara ya zuru oke, ọ ga-eme ya na-akpaghị aka mgbe ị kwalite site na iji usoro ọkọlọtọ dị ka mmelite dnf, nkwalite dnf. Mbupute ya ga-agbanwe naanị ka ntọhapụ.
Tọzdee, Ọktoba 14, 2021 10:26 nke ụtụtụ
Daalụ. Nke ahụ mechiri nkwekọrịta ahụ! M ga-amalite iji ya ugbu a kama ichere ọzọ 6 ụbọchị (ma ọ bụ karịa) maka ukara ntọhapụ nke Fedora 35. M na-akwaga m niile nke m ngwa na data si Windows 10, na 35 beta yiri ka a mma ebe. ala karịa 34 kwụsiri ike (ebe ụfọdụ ngwa m tụkwasịrị obi tọrọ karịa ihe m na-eji na WIndows). Enwere m mmasị na interface onye ọrụ Gnome 40/41 ọhụrụ; ọ dị ka iku ume nke ikuku ọhụrụ mgbe ijiri interface desktọọpụ “ọkọlọtọ” afọ 30! Naanị mkpesa m bụ ka esi egosipụta ụbọchị na oge na Gnome Files (Nautilus); A sị m na enwere ụzọ isi gbanyụọ ụbọchị ikwu. Ọ dị ka onye njikwa faịlụ ọ bụla na mbara ala (ma e wezụga nke Google) na-enye gị ohere ịhazi ụbọchị ọ bụla ịchọrọ. Mmasị m bụ YYYY-MM-DD HH:mm:ss.
Satọde, Ọktoba 16, 2021 7:11 nke abalị
Ọ bụrụ na ị naghị enwe obi ụtọ na GNOME 41, ị nwere ike ịnwale ndị ọzọ na Fedora 35 echefula. M kere ụfọdụ nkuzi na ụzọ ụfọdụ.
Wenezde, Ọktoba 20, 2021 10:31 nke ụtụtụ
Edobere Fedora na ntọhapụ ikpeazụ maka izu ọzọ ọ dị ka.
Satọde, Ọktoba 23, 2021 8:08 nke abalị
Anaghị m ekwukarị okwu na blọgụ m na-agụ. Ma oge a dị iche. Naanị ịsị, Daalụ!
Zaa Miguel Angel
Satọde, Ọktoba 23, 2021 9:43 nke abalị
Daalụ, Miguel nwere ekele maka nkwupụta a. 🙂